Wararkii Ugu Dambeeyey Kulamadii League Cup-ka – GEELLE MAG
Home » Ciyaaro
Wararkii Ugu Dambeeyey Kulamadii League Cup-ka
Cali Axmed Posted On September 26, 2019
Manchester United ayaa ka badbaaday cabsi ay kaga hari laheyd tartanka League Cup-ka kadib markii ay ku badiyeen 5-3 rigoorayaal ah , halka West Ham ay guul darro 4-0 ah ka soo gaartay Oxford.
Kooxda dhibtooneysa ee uu hogaamiyo Ole Gunnar Solskjaer ayaa barbaro 1-1 ah ku gashay Old Trafford kadib markii 16 jirka Luk Matheson uu ka dhaliyay goolka barbaraha daqiiqadii 76-aad ee ciyaarta, iyadoo United hogaanka uu u dhiibay Mason Green wood daqiiqadii 68-aaad.
Man United ay halis ugu jirtay in ay si sharaf dhac ah uga baxaan tartankaan, laakiin waxa ay ku badiyeen ugu dmabeyn 5-3 rigoorayaal ah, iyadoo Daniel James uu rigooradii guusha dhaliyay kadib markii Sergio Romero rigooradii labaad ka qabtay ciyaartooy Rochdale ka tirsan ee lagu magacaabo Jimmy Keohane.
In kasta oo United ay ka fogaatay ceeb ka soo gaari laheyd kooxda ku jirto kaalinta 17-aad ee ka ciyaarta League One-ka, haddana weli waxaa jira su’aalo cusub oo ku saabsan awooda Solskjaer uu kusii maamuli karo kooxdan.
United ayaa ku jirta booska sideedaad ee Premier League-k Ingiriiska, kadib guuldaradii Sabtidii ka soo gaartay West Ham, taasoo ka dhigeysa in ay keliya labo guul gaareen lix kulan oo ay ciyareen.
Liverpool ayaa guul 2-0 ah ka gaartay kooxda heerka seddexaad ee MK Dons, iyadoo Harvey Elliott uu noqday ciyaaryahankii ugu yaraa ee kusoo bilowda xalay kooxda Reds.
16 jirkan ayaa soo bandhigay qaab ciyaareed cajiib ah, isaga oo laba jeer ku dhawaaday inuu shabaqa soo taabto, xilli James Milner iyo Ki-Jana Hothing goolasha u dhaliyeen Reds.
Frank Lampard ayaa guushii ugu horeysay isagoo ah macalinka Chelsea ka gaaray tartankan, kadib markii 7-1 kooxdiisa ay kaga badiyeen kooxda heerka 4-aad ka ciyaarta ee lagu magacaabo Grimsby. Ross Barkley ayaa furay goolasha iyadoo Michy Batshuayi laba jeer shabaqa soo tabtay, Pedro, Kurt Zouma, Reece James iyo Callum Hudson-Odoi ayaa sidoo kale goolal ka dhaliyay kulankaan.
Xiddiga garabka ka ciyaara ee reer England ayaa markiisii ​​ugu horeysay u saftay Chelsea tan iyo markii uu soo gaaray dhaawac bishii Abril.
Lampard wuxuu fursad siiyay afar ciyaartooy oo kasoo qalin-jebiyay Akadeemiyada, kuwaasoo kusoo bilowday kulankii xalay.
Gilmour oo qadka dhexe ka ciyaara, James iyo Marc Guehi ay sidoo kale ka mid ah da’yartii xalay qeybta ka ahaa kooxda Chelsea.
Madaxweyne Ku Xigeenka Puntland Oo Gaaray Dalka Turkiga
Roob khasaaso geystay oo ka da’ay Magaalada Baydhabo
Qaramada Midoobay oo gurmad degdeg ah gaarsiisay dadka ay saameeyeen fatahaadaha
Wasiir Maareeye oo fariin u diray Maamul Goboleedyada dalka ka jira